१० मिनेट जति महिलाको स्तन हेर्ने पुरुषको आयु ५ वर्ष बढ्ने ! - Sawal Nepal
१० मिनेट जति महिलाको स्तन हेर्ने पुरुषको आयु ५ वर्ष बढ्ने !
काठमाडौं एजेन्सी २०७८ श्रावण १५, २१:२९
तपाईंले आफूलाई पातली भन्नुभए पनि तौल लेख्नुभएको छैन । शरीरको तौलअनुसार अन्य भाग जस्तो ठयाक्कै नहुने भएपनि तौल कम हुँदाको स्तन पनि सानो हुने स्थिति रहन्छ । हामी शरीरको कति हेरेर तौल सामान्यभन्दा कम वा बढी भएको निक्यौल निकाल्छौं । सामान्यतः हामी वयस्क व्यक्तिको उचाइ र तौलका आधारमा शरीरमा कति ‘बोसो’ छ नाप्छौं । यसलाई ‘‘ भनिन्छ । हुन त यो पद्धतिका पनि आफ्नै सीमितताहरू छन् । यो ‘‘ यदि १८ दशमलव ५ देखि २४ दशमलव ९ सम्म छ भने त्यसलाई सामान्य तौल मानिन्छ ।
स्तन बढाउने उपाय – घरेलु उपाय गरेर स्तनको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्तनलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ । सौन्दर्यसँग स्तनको आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसै कारणले संसारभर नै स्तनलाई बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ । छोटकरीमा केही प्रमुख विधिको चर्चा गरौं । क्रिम प्रयोग गरेर स्तन वा मुन्टोको मालिसले स्तनको आकार बढ्ने दाबी गरिएपनि यसले ‘स्थायी’ रूपमा आकार बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छैन । केही कसरतले छातीको मांसपेशीलाई बलियो र ठूलो बनाउँछ र यस्तो स्थितिमा स्तन ठूलो भए जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसले स्तनको ‘कपको आकार’ लाई परिवर्तन गर्दैन । विभिन्न रसायनिक औषधियुक्त मल्हमको प्रयोग अर्को उपाय हो ।
शल्यक्रिया एउटा अर्को प्रचलित उपाय हो । शल्यचिकित्साले नकारात्मक प्रभावबिना नै नतिजा दिन सक्ने दाबी गरिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन । शल्य चिकित्सा गरेर स्तनको आकार बढाउन सकिन्छ, तर अत्यधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कुप्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंले फोम भएको ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । स्तन कसैलाई देखाउनुपर्ने अङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अङ्ग हो । यसलाई आकर्षक देखाउने अन्य उपाय जस्तैः थुनचोली (ब्रा) भित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्तनलाई माथितिर उचाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ । श्रीमानलाई तपाईंको स्तनका सम्बन्धमा कुनै गुनासो छैन भने यो एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ । स्तन सानै भएपनि त्यसले यौन सुख दिन दूध उत्पादन गर्न सक्छ । -हेल्थटुडेबाट
एक अनुसन्धान दाबी : महिलाको स्तन हेर्दा पाउनु हुने छ तपाईले यस्ता फाइदा
पुरुषहरु महिलाको कुन कुरामा बढी आकर्षित हुन्छन् भन्ने बिषय गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुले पुरुषहरु महिलाको वक्षस्थल (स्तन) प्रति सबैभन्दा बढि आकषिर्त हुने तथ्य खुलेको छ। पुरुषहरुले महिलाका वक्षस्थलमा नजर घुमाउने अब नयाँ बहाना पाएका छन् । एक अध्ययनले दाबी गरेको छ ,की महिलाका वक्षस्थल हेर्नाले पुरुषहरुको आयु बढ्दछ । बेलायतको न्यू इंगल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा केही समयअघि छापिएको एक अनुसन्धानका अनुसार हरेकदिन लगभग १० मिनेट जति महिलाका वक्षस्थलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले नजर् लगाउने पुरुषहरुको आयु ५ वर्ष सम्म बढ्ने जनाएको छ।
जर्मनीमा गरिएको यो अध्ययनमा शोधकर्ताहरुले के दाबी गरेका छन् भने महिलाका वक्षस्थलमा १० मिनेट सम्म नजर दौडाउनु भनेको आधा घण्टासम्म जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु सरह हो ।पाँच वर्षमा झण्डै २ सय जना पुरुषमा गरिएको अध्ययन सर्भेक्षणबाट अनुसन्धानकर्ताहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार जो पुरुषहरु महिलाका वक्षस्थलमा आँखा लगाउँछन् र घुरेर हेर्छन् उनीहरुमा उच्च रक्तचाप, मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम कम हुन्छ । साथै उनीहरुमा हृदयगति पनि सन्तुलित हुन्छ ।
यौन चाहनाले मानिसको रक्त संचार प्रकियालाई सन्तुलित बनाउने ,अनुसन्धानकर्ता डाक्टर क्यारन वेदरवीले जनाएका छन् जसको कारणले मानसको स्वास्थ्य राम्रो हुने गर्दछ । स्वदेश नेपाल बाट साभार
एक व्यक्तिको यौनाङ्ग अलग्गिएको थियो, डाक्टरले जोडेर बनाए रेकर्ड
यी हुन् सेक्स पावर बढाउने घरेलु उपायहरू